शुक्रबार यसरी गर्नुस् महाकालीको पूजा , तुरुन्त लाभ मिल्नेछ ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/शुक्रबार यसरी गर्नुस् महाकालीको पूजा , तुरुन्त लाभ मिल्नेछ !
यसरी गर्नुस् पूजा माता कालीकी साधना सन्यासी र तान्त्रिकहरु पनि गर्ने गर्छन् । माता कालीका भक्त मान्ने गर्छन् कि माता काली कालको संम्हार गर्ने र मोक्ष प्रदान गर्ने गर्छिन् । शुक्रवार कालीको उपसनाको लागि उनको तस्बिर वा मूर्तिमा स्वच्छ र पवित्र स्थानमा राख्ने र पानीले पखालेर मूर्तिमा तिलको टिका लगाउने र फूल चढाउने र बसेर १०८ पटक ऊं क्रीं कालिकायै नमः और ऊं कपालिन्यै नमः भनेर मन्त्र उच्चारण गर्ने ।
र आफ्नो श्रद्धा र भक्तिको अनुसार भोग चढाउनुहोस् ।महाकालीको पूजाबाट मिल्छ तुरुन्त लाभ कालीको साधना र उपसनालाई निकै प्रभावशाली मानिन्छ । माता कालीको पूजा आरधनाबाट तुरुन्तै परिणाम दिने विश्वास गरिन्छ । उनीप्रति विश्वास र श्रद्धा गर्नेको जीवन निकै सुखमय हुने विश्वास गरिन्छ । महाकाली
यो पनि समाचार >>>>
जाडो मौसम शुरु भइसकेको छ । जाडोयाममा धेरै चिसो हुने भएकाले नवजात शिशु र सुत्केरी आमा दुवैका लागि जोखिम हुनसक्छ । नवजात शिशुको केयर गरिएन भने उनसमा छिटो संक्रमण हुनसक्छ ।नवजात शिशुलाई जति नै कपडा लगाइदिएपनि चिसो हुन्छ । मौसम परिवर्तनको असर उनीहरुलाई धेरै हुन्छ जसको रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ ।
त्यसैले नवजात शिशु पनि धेरै कमजोर हुन्छन् । चिसो मौसममा बच्चाहरुलाई रुघाखोकी र घाँटीमा संक्रमण हुने खतरा बढी हुन्छ ।जाडो मौसममा चिसोबाट बच्न न्यायो कपडा लगाएर तातो बनाएर राख्नुपर्छ । चिसो बढी भएमा बच्चा बिरामी पनि पर्न सक्छ । बच्चाको सास फेर्ने नली साँघुरिन्छ यस्तोमा खकार जमेर सास लिनमा कठिनाई हुन सक्छ ।